सत्तामा बस्दा यति ठूलो के बिगारिदियौँ र तिमीलाई कोरोना संक्रमण हुँदा मात्र रिप लेख्न पाइयोस् लेख्छन्:: Naya Nepal
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने अहिले नेपाली समाजमा मानवता रित्तिदै गएको प्रष्ट छ । केही कुरामा चित्त नबुझेको हुँदो हो, केही अप्ठ्यारो पक्कै भएकै होला । तर शत्रुलाईपनि दु:ख बिराम लाग्यो भने ठिक्क पर्यो नभन्नु भन्ने नेपाली युक्ति अहिले कहाँ गयो ? मानिस किन यति धेरै छाडा बन्दै गए ।
मानविय संवेदना किन यति धेरै संकटमा पर्यो । अब सबैले नसोच्ने हो भने हाम्रो समाज कता तर्फ जान्छ भन्ने चिन्ता ती संवेदना हिन पोष्टबाट पक्कै लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याविटनमा रहेका केही पात्रहरुलाई शनिबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भयो ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफुहरु संक्रमित भएको र आफ्नो सम्पर्कमा रहेकाले स्वास्थ्य सजकता अपनाउँन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । उक्त पोष्टमा मिनेटभरीमा नै सयौँ कमेण्ट आउँन थाले । उनीहरुको पोष्टलाई स्क्रिन सर्ट गरेर आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुन थाले । कसैले उनीहरुकै पोष्ट सेयर गरे । पोष्टमा कसैले खिसिट्यूरी गरे । कसैले संवेदना प्रकट गर्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।
कसैले मानवीय संवेदना नै भूलेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली (रिप) लेख्न पाउँ सम्म लेखे । सामान्य नागरिक मात्र को त के कुरा गरौँ । फेसबुक पोष्टमा केही चिकित्सक, डाक्टर, प्राध्यापकले समेत उनीहरुको पोष्टमा रिप लेख्न पाउँ भन्दै कमेण्ट लेखे ।
हामी त्यो देखेर चकित बन्यौँ । आखिर सल्लाहकार, नीजि सचिव, स्वकीय सचिवले मात्र सत्ताको जागिर खाएर के बिगारे ? जब कि तपाई मानविय संवेदनलाई समेत ख्याल नगरी यति धेरै रिस व्यक्त गरिरहनु भएको छ । के तपाईहरुमा मानवियता रित्तिदै गएको हो ? त्यस्तो लेख्नेहरुलाई हाम्रो तर्फबाट कमेण्ट ।
यस्ता केही पात्रलाई कारबाही गर्न किन डराउने सरकार ? केही कुहिएका आलु फाल्दा अरु आलु कुहिदैन भने किन आँट नगर्ने । जनताका जनप्रतिनिधिले बनाएको कानून यहाँ किन आकर्षित नहुने । केहीलाई कारबाही गरे अरु सचेत हुने थिए की ।
रासायनिक मलको अंश डोलोमाइड चट्टान नेपालमै उत्खनन गर्ने सरकारको तयारी
बैतडी । सरकारले रासायनिक मल बनाउने कारखानाका लागि डोलोमाइड चट्टान नेपालमा नै उत्खनन गर्ने तयारी गरेको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ बसौरामा डोलोमाइड चट्टान पत्ता लागेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले रासायनिक मल बनाउने कारखानाका लागि सो चट्टान उत्खनन गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले उल्लेख गरेको छ ।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा शनिबार फस्फोराइड अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ कार्यको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उदघाटन पनि गरेका छन् । उदघाटन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले मलखादमा प्रयोग हुने फस्फोराइडको नेपालमा उद्योग नरहेकाले दोगडाकेदारमा गरिएको परीक्षण सफल भए उद्योग नै स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘उद्योग स्थापना भएपछि रोजगारीको समस्या हट्दै जानेछ ।’
नेपालमा रहेका थुप्रै खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘अब हरेक क्षेत्रलाई रोजगारीसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
यसअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले असोज ५ गते प्राविधिकको टोली बैतडी पठाएको थियो । विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् कुमार खड्का र भूगर्भविद् सुजन देवकोटालगायतको विज्ञ तथा प्राविधिकको टोली केही दिन अगाडि बैतडीको दोगडाकेदार पुगेको थियो ।
गाउँपालिकामा परीक्षण गरिएको स्थानमा फस्फोरस भएको पुष्टि भएमा यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि र रोजगारीमा सहयोग पुग्ने दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताए । फस्फोराइड खानीमा ५० मिटर गहिरो प्वाल पारेर परीक्षण गरिएको राससले जनाएको छ । जहाँ फस्फोराइड भएको तथ्य पुष्टि छ । अब उत्खनन गरेर उद्योग नै सुरु गरिनेछ एक सरकारी अधिकारीले भने ।